Ha na-edewe Ụlọ Nzukọ Alaeze ọcha
Baịbụl kwuru na e nwere ụzọ ndị nwoke abụọ na-arụrụ ọgbakọ ọrụ. Ha bụ “ndị nlekọta [ya bụ, ndị okenye] na ndị ohu na-eje ozi.” (Ndị Filipaị 1:⁠1) N’ọgbakọ ọ bụla, a na-enwekarị ndị okenye na ndị ohu na-eje ozi. Olee ọrụ ndị ohu na-eje ozi na-arụ?
Ha na-enyere ndị okenye aka. Ndị ohu na-eje ozi na Jehova dị n’ezigbo mma. Ha kwesịrị ntụkwasị obi, dịrịkwa uchu. Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị na-eto eto, ụfọdụkwa abụrụ ndị torola eto. Ha na-arụ ọrụ ndị dị mkpa n’ọgbakọ, bụ́ ndị na-eme ka ihe na-aga siriri werere. Ọrụ ha na-abụkarịkwa ọrụ e ji ọkpụkpụ aka arụ. Ọrụ ndị a ha na-arụ na-eme ka ndị okenye nwee ike ilekwasị anya n’ịkụzi ihe na ilekọta ọgbakọ.
Ha na-arụ ọrụ ndị bara uru. Ụfọdụ ndị ohu na-eje ozi bụ ndị atendantị. Ha na-anabata ndị bịara ọmụmụ ihe. Ndị ọzọ na-elekọta ígwè e ji ekwu okwu. E nwekwara ndị nke na-ahụ maka akwụkwọ anyị, nweekwa ndị nke na-ahụ maka ego ọgbakọ. Ụfọdụkwa na-ahụ maka ebe ọgbakọ na-aga ekwusa ozi ọma. Ndị ohu na-eje ozi na-enyekwa aka edewe Ụlọ Nzukọ Alaeze ọcha. Ndị okenye nwere ike gwa ụfọdụ n’ime ha ka ha gaa na-enyere ndị agadi nọ n’ọgbakọ aka. N’eziokwu, ha na-eji obi ha niile arụ ụdị ọrụ ọ bụla a gwara ha rụọ. Ọ bụ ya mere ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ ji akwanyere ha ùgwù.​—⁠1 Timoti 3:⁠13.
Ha na-akpa àgwà e ji mara ezigbo Ndị Kraịst. Ihe mere e ji ahọpụta ndị ohu na-eje ozi bụ na ha na-akpa àgwà ọma ndị e ji mara ezigbo Ndị Kraịst. Ha na-eme ka okwukwe anyị sikwuo ike ma ha na-ezi anyị ihe n’ọgbakọ. Otú ha si agachi ozi ọma anya na-eme ka anyị jiri ịga ozi ọma kpọrọ ihe. Ha anaghị agba ihe ndị okenye kwuru ụkwụ. Nke a na-eme ka ọgbakọ dịrị n’otu, ndị nọ na ya ana-enwekwa obi ụtọ. (Ndị Efesọs 4:16) Ka oge na-aga, hanwa nwekwara ike ịbụ ndị okenye.
Olee ụdị ndị ndị ohu na-eje ozi bụ?
Olee otú ndị ohu na-eje ozi si enye aka eme ka ihe na-aga siriri werere n’ọgbakọ?
Ị gaa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, gbalịa mata otu okenye ma ọ bụ otu ohu na-eje ozi. Na-eme otú a ruo mgbe ị matachara ma ha ma ndị ezinụlọ ha.